वाम गठबन्धनले मिर्चैया थाना चौकमा मंगलवार वाम गठबन्धनको संयूक्त चुनावी कार्यालयको उद्घाटन् गरेको छ । उदघाटन समारोहमा हजारौ कार्यकर्ताहरु उपस्थित भएका थिए । त्यसै गरी संयुक्त वाम गठबन्धनले क्षेत्र नं. ४ को वर्छवा, नरहा, महेशपुर ,पर्साही, विष्णुपुर को वडा नंं २,३ र ४ मा कार्यकर्ता भेला संपन्न गरेको छ । हरेक स्थानहरुमा माओवादी केन्द्र र एमालेका हजारौ कार्यकर्ताहरुको सहभागीता रहेको थियो । त्यसैगरी वाम गठबन्धनले कर्जन्हामा नगर स्तरीय कार्यकर्ता भेला पनि संपन्न गरेको छ । सितापुर , वेल्हा र फुलवरीयामा पनि कार्यकर्ता भेला संपन्न भएको छ ।
कार्यकर्ता भेला संपन्न भएका स्थानहरुमा आ आफ्नो वडामा चुनाव प्रचारका लागि संयुक्त कमिटी गठन गरी प्रचार प्रसार अभियानलाई तिव्र गति प्रदान गरिएको छ । संयुक्त वाम गठबन्धनहरुको भेलामा उपस्थित जन मानसलाई हेर्दा गठबन्धनको पक्षमा जनलहर आएको देखिन्छ ।
वाम गठबन्धनको संयुक्त भेलाहरुमा संवोधन गर्दै क्षेत्र नं. ४ का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार कमरेड अजय शंकर नायकले भन्नुभयो । आज संयुक्त वाम गठबन्धन बनेको र यो गठबन्धनको पक्षमा नेपाली जनता लामवद्ध भएको देखेर देशी तथा विदेशी शक्तिहरुको मनमा ढ्यांग्रो बजेको छ । देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु वम गठबन्धनमा दरार उत्पनन गराउन र फुटाउन अनेक प्रपञ्च गरिरहेका छन् । नेता नायकले भन्नुभयो तर हामी तिनलाई भन्न चाहान्छौ यो वाम गठबन्धन यो चुनावका लागि मात्र होईन दुवै कम्यूनिष्ट पार्टी एकिकरण गरी शक्ति संचय गर्ने र नेपालमा समाजवादी क्रान्तिको कार्यभार पुरा गर्नका लागि हो । यो कुरा हाम्रा नेता पुपष्कमल दाहाल र केपी ओलले राम्ररी बुझेका छन् । भुरे टाकुरे दलहरु र पुरातनपंथी नेपाली कांग्रेसको वर्कतले देशको मुहार फेरिदैन । त्यसकारण प्रतिक्रियावादीहरुको हरेक षडयन्त्रलाई असफल पारिन्छ । नेपाली जनताले वाम शक्तिले राज्य सत्ता चलाएको हेर्न चाहेका छन् । मुलुकलाई छिटो समृद्धिको बाटोमा लम्काउन वाम शक्तिले नै सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने चाहेका छन् । सरकार बनाउन मात्र होईन दुई तिहाई बहुमत सहितको शक्ति संपन्न र स्थिर सरकार आजको नेपाल र नेपाली जनताको लागि आवश्यक छ । त्यसकारण हरेक स्थानमा वाम गठबनधनले जित्न आवशयक छ । यो कुरा सम्झेर मनन गरेर हरेक कार्यकर्ता परिचालित हुन आवश्यक छ ।
त्यसैगरी भेलामा आफ्नो मन्तव्य राख्दै क्षेत्र नंं ४ को प्रदेश सभा ख का उम्मेदवार कमरेड दिलीप साहले भन्नुभयो केन्द्र सरकार वामपन्थीको मात्र भएर पुग्दैन । प्रदेश सरकार पनि वामपन्थीहरुले बनाउनु पर्छ । अनि बिकासको कार्यले गति लिन्छ । संघीयता शव्द पनि कसैले नसुनेको वेला माओवादीले नै संघीयताको सवाल उठाएको र आज देशमा संघीय सरकार बन्ने दिन आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो हरेक राजनैतिक परिवर्तनका लागि नेपालका वामपन्थीहरुले देश र जनताको लागि बलिदानको कोटा चुक्ता गरेका छन् ।
बिकास र निर्माणको प्रसंग कोट्याउँदै नेता दिलीप साहले भन्नुभयो मिर्चैया शहरलाई सर्वप्रथम डुवान मुक्त शहर बनाईने छ । यो कार्य एक वर्ष भित्रै पुरा गरिने छ । चुरेवाट आउने वर्षको भेललाई शहर देखि उत्तर तर्फवाटै बतहा र जीवा नदी तर्फ डाईभर्ट गर्ने संचरचना निर्माणमा कुनै ढिलाई हुने छैन । उहाँले कर्जन्हालाई ग्रामिण वजारको दर्जा वाट उदीयमान शहरमा परिणत गर्ने बताउनु भयो । सडक देखि उत्तरको खानेपानीको समस्यालाई एक वर्ष भित्र निमिट्यान्न पार्ने पनि दावी गर्नुभयो ।
संयुक्त वाम गठबन्धनको सभालाई संवोधन गर्दै क्षेत्र नं. ४ को प्रदेश ख का उम्मेदवार तुलसी प्रसाद यादवले भन्नुभयो नरहामा ग्रामिण वजार र विष्णुपुरलाई शहरीकरण गर्ने कार्यमा कुनै कसर बाँकी राखिने छैन । मिर्चैया कल्याणपुर सिरहा सडक २ वर्ष भित्र २ लेनको पक्की बनाईने र कल्याणपुरमा स्नातक तहसम्मको एक क्याम्पस निर्माण गरिने छ । कमला नदीको बाढीले बाँध फुटाउने र धनजनको क्षति हुने अवस्थालाई सदाको लागि हटाईने छ । बाँधको उचित मर्मत तथा मजवुतिकरण गरने छ । कल्याणपुर बजारको शहरीकरण गर्न गुरुयोजना तयार गरी काम गरिने छ ।